Zimbaboe: Mampahafantatra Ilay Hetsipanoheran’ny Sendikà ny DVD Iray Navoaka An-tsokosoko · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2018 18:43 GMT
(Fanamarihana : lahatsoratra nivoaka tamin'ny Ôktôbra 2006)
Tonga taty amiko ity lahatsary ity omaly alina avy any amin'i Ethan Zuckerman. Maharitra folo minitra eo ho eo, izany hoe lava nòho ireo lahatsary hafa efa nozarainay, nefa tena ampirisihiko hijery azy ianao.
Hita anatin'io ny sarin'ny mpitandro filaminana Zimbaboeana sy ny sampandraharaha misahana ny angondrakitra fiarovana orinasa izay nandrava fihetsiketsehana nilamina nataon'ireo mpikambana ao amin'ny Kaongresin'ny Sendikà Zimbaboeana (ZCTU) tamin'ny 13 Septambra. Nodarohan'ny mpitandro filaminana imbetsaka ireo mpanao fihetsiketsehana, izay nitaky ny famatsiana ARV (fanafody miady amin'ny virosy mivadika) ho fitsaboana ny VIH sy ny fisian'ny karama farany ambany indrindra ary ny fanamarinan-toerana ny vidin'ny entam-barotra fototra sasany. Ahitàna resadresaka miaraka amin'ny mpikambana ao amin'ny ZCTU ny ampahany lehibe amin'io lahatsary io, izay mamaritra ny zava-nitranga tamin'iny andro iny, sy ny fihetsik'ireo mpitandro filaminana. Nanome dikateny tamin-katsaram-panahy i Ethan sy Rachel Rawlins.
Rehefa nipongatra ireo vaovao mikasika ilay fidarohana, niampanga mafy ny fanatonana tsy mifaditrovana nataon'i Robert Mugabe taminà fihetsiketsehana milamina sy ara-drariny avokoa ny sendikà tany amin'ny firenen-kafa. Ny herinandro lasa teo, nolavin'ny fitsarana iray ny tatitry ny mpitandro filaminana mikasika ilay tranga ary nahemotra ho amin'ny 17 Ôktôbra ny fitsaràna ireo ZCTU mpanohitra, mba hanomezana fotoana ny Departemantan'ny Fanadihadiana ny Heloka Bevava hanaovana famotorana lalina momba ireo fiampangàna ny fampijaliana voalaza fa nataon'ny mpitandro filaminana. Rehefa nalefa an-tsokosoko ivelan'i Zimbaboe ka tonga tany Afrika Atsimo tamin'ity herinandro ity ny DVD iray nisy ny sarin'ireo fihetsiketsehana, nitarika ny lehiben'ny iray amin'ireo sendikan'ny mpiasa any Afrika Atsimo hilaza izany fa hanome dika iray an'io DVD misy ny fidarohana io ho an'ny Filoha Thabo Mbeki izy mandritra ny fihaonany miaraka aminy amin'ny Alatsinainy.
Hipoitra eto araka ny fivoaran'ny raharaha ny vaovao…